What isaConstitution? Principles and Concepts | International IDEA
Home / Publications / Primers / What isaConstitution? Principles and Concepts
English, မွနျမာဘာသာ, français, español
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအများစုသည် သာမန်ဥပဒေပြဌာန်းမှုဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း မပြုလုပ်နိုင်သော (အဆင့်မြင့်ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည့်) နိုင်ငံတော်၏ အခြေခံမူများ၊ အစိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အစိုးရ ယန္တရားများ၊ နိုင်ငံသားများ၏ အခြေခံကျသည့် လူ့အခွင့်အရေးများကို သတ်မှတ်ဖော်ပြကြသည်။ အဆိုပါ အဆင့်မြင့် ဥပဒေကိုပင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဖြစ် ရည်ညွှန်းသတ်မှတ်လေ့ရှိပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများ၊ သဘောသဘာဝများနှင့် ၄င်းတို့နှင့် အခြားသော တရားဥပဒေနှင့် နိုင်ငံ့ရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုများအကြားဆက်စပ်မှုသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ အကြား သိသိသာသာ ကွဲပြားမှုရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြီးပြည့်စုံသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိပါ။ သို့သော် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်လက်ခံထားသည့် ဖွဲ့စည်းပံ အခြေခံဥပဒေ၏ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်တွင် အောက်ပါလက္ခဏာရပ်များ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
The fundamentals of constitutions